Ogaden News Agency (ONA) – Taariikh Halganeedka CWXO (ee Daaha laga rogay )
Taariikh Halganeedka CWXO (ee Daaha laga rogay )
Aroor Sabti ah Salaaddii Subax baan ku tukannay Duleedka harta Harada Gurracan. Goobtaas oon ku soo uruurinnay dhaawac iyo bukto afar iyo toban isku ah. Dhaawaca qaarbaa xabbadi jajabisay oo dhisnaa. Meeshu waddada haratirista la yidhaahdo waxay u jirtay 400 oo tallaabo waxayse ahayd meel hawd adag ah shanqadha iyo tubtana waan ka ilaalinnay. Isla goobtaa meel u jirta 600 oo tallaabo waddada dusheedana ah waxaa dagganaa Toban xubnood oo ka mid ahaa Ciidanka xoraynta Ogadenia. Meeshaas oo Bar Kantarol ahayd isla markaana waxay Ahayd Goob dhaawaca iyo buktada laga ilaaliyo. Waagaas waxaa gabagaba ahaa dagaalladii ay ugu magac dareen Tigreegu Seddex geeska Barmuuda. Magacan oy ula jeedeen dhulka u dhexeeya Qabridaharre, Wardheer iyo Dhagaxbuur oo Taliska ONLF ay Dagganaayeen. Seddex-geeskaas waxuu bartilmaameed u ahaa Ciidanka EPRDF Ilaa Seddex Olole Millatari ah oy ku soo qaadeenna kii u danbeeyay baa markaa lagu jabiyay.
Aniga iyo N/hure wehel ii ahaa oo daawo u wadna dhaawaca iyo buktada waxaannu goobtaas ku soo hoyannay habeenkaas, waxaan goobtaas ku kullannay Ilyaas iyo laba N/hure oo wehel isu ahaa. Goobtaas waxaan isku ahayn 14 dhaawac iyo Bukto ah 7 u addegaysa anig oo lammaan iyo Ilyaas oo seddexan. lix iyo labaatankan iyo Tobankii Waddada joogay Habeenkii intiisii badnayd waxaan ku soo jeednnay sheekooyin xiisa badan oo ahaa sidii ay ku dhammaadeen Dagaalladii ay tigreegu ka soo qaadeen Qabridaharre, Wardheer iyo Dhagaxbuur labadii Todobaad ee tagay.
Waddada aad bay baabuurtu u martaa. Gaadiid Tigree ah oo Waddadaa Badheedh ku soo mari Karayna ma ahayn wax caadi ah. Ciidanka Gurmadka oo Taliska CWXO uu la socdana waxay markaa ku sugnaayeen DIG Xarunta JWXO-na waxay fadhiday Baarta. Qaybaha Ciidankuna waxay kala jireen Aagagoodii iyo Gobolladoodii.
Annaga oo Salaaddii Subax tukaannay dabkiina shidnay ayaa waxaannu maqallay Baabuur badan guuxeed kamase aannaan shakiyin. Markii Guuxii Baabuurtu soo gaadhay Bartii Kantarolka Xabbad baa billaabatay Cabaad iyo qarax farabadanna wuu dhacay. Dhaawacii baan dhismihii ka furray oon Midkasta Qutube u dhiibnnay. Raggii darraa oo Xuseen-wayne ka mid ahaa baan waddo qaadsiinnay, waxaana naga hor yimid Gabadh yar oo Adhi aroor ah wadda. Waxaan ka Codsaday inay adhiga xidhkii aan ka soo baxnay gayso kana soo kaxayso deedna ay raadkannaga soo qaadsiiso, waxaan ku darray N/hure adhig la kaxeeya. Intay adhigii xidhkii geeyeen bay haddana naga soo daba kaxeeyeen sidaas baan ugu raad gadnay dhaawacii iyo buktadii intii darrayd oo shan isugu soo ururtay. Ragga intiisii badnaydna dhaawacii iyo jirradii haysay way illoobeen, hubkoodii bayna Qaateen.
21 Nin oo hubaysan oo intooda badan Bukto iyo dhaawac Qandhadii Dagaalku ka jabiyay ah baa dib u soo laabtay, Xabbaddiise Durba way istaagtay. Meel aan ku hagaagnno annga oo garan la’ ayaa waxaan aragnnay nin reer miyi ah waxuuna noo sheegay in Laba Baabuur Ciidan saarraa oo Tigree ah uusan Nina ka bixin oy goobtaa iyaga iyo Buubuurtiiba ku basbeeleen Afar Baabuur oo kale Ciidankii Saarraa inay goobtii joogaan Ciidankii Tobanka ahaa ee waddada joogayna meel aan ka fogayn iyaga oo bad qaba ay joogaan. Hadlkii oo Ninku noo wado ayaa Waxaa mar labaad billaabatay xabbad aad u xooggan. Meeshii markaan ku dhaqaaqnay, meel kale oon naga fogayn waxaa iyana ka billaabatay Xabbad kale. Waxaannu isu qaybinnay laba qaybood. Qayb Shaxdan wax ka gabagabaysa iyo Qayb Xaruntii u digta shantii Ninna xaalkooda ogaata.
Abbaan-Duulka Ciidank EPRDF oo saldhiggiisu markaa Waafdhuug ahaa Bartaana ka hoggaaminayay dagaalkii Seddex geeska ahaa markii ay ku fashilmeen waxay shir ku qaateen Waafdhuug waxayna Taliyayaashii Ciidamada iyo Generaalkii Abbaanduulaha Ciidanka Ethiopia Soo qaateen Lix Baabuur waxayna Go’aansadeen inay Niska danbe Habeenkii Guure ku dhaafaan Seddexgeeska Guduudan (waa Magac labaad) oy aaggaas u bixiyeen. Ha yeeshee Markay Marayeen Goobtii aan kor ku soo sheegnnay Baabuurtii ay wateenna Soo Guuxday waxaa loo diray Axmed yare, si uu u joojiyo baabuurta. Axmed oo Geed ku hoos jira Waxuu arkay Baabuur Ciidan ah oo aad u soo Xawaaraynaya. Si dhakhsa ah buu Go’aan u qaatay waxuuna Baas Ku furay Gabiinka (shirka) waxuuna la helay Darawalkii iyo laba Sarkaal oo la fadhiday. Deedna Baabuurkii waxuu dhex Qaaday xidh Bisiq ah wixii saarraana Bisiqii baa laayay. Axmed yare oo Bartiisii Taagan waxaa soo Dardaray Baabuurkii labaad. Sidii kii hore buu yeelay Baabuurkii iyo wixii saarraaba wixii kii hore ku dhacay baa ku dhacay. Intaa ka dib Axmed yare iyo raggiisii meesha way ka baxeen iyaga oo bad qaba Tigreegana General iyo Seddex Kornayl Rag ay ka Mid yihiin oo lix iyo Toban ah baa markaa ka dhintay.
Tobankii N/hure waxay Go’aansadeen inay mar labaad weeraraan si ayna xagga Dhaawaca iyo Buktada ugu daqaqamin Tigreegu. Xabbadda marka danbe bilaabatayna saas bay ahayd. Dagaalkan oo dhawr qaybood ahaa Qaybtan oo Axmed yare Gabadhii Adhiga la Joogtay iyo Buktadii Caafimaadday ay ugu xiisa badnaayeen intaa ha inoo joogto.
Waa inoo Qaybta labaad iyo Dagaalka Baaxaddiisii iyo waxii xaal ku Danbeeyay.
WAA SHEEKO AAD IYO AAD UXIISO BADAN